Malta na-ekwupụta ọkwa agụmakwụkwọ 30 maka njem njem ihu igwe
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Malta na-ekwupụta ọkwa agụmakwụkwọ 30 maka njem njem ihu igwe
Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na mkparịta ụka ndị ode akwụkwọ na Gozo Campus nke Institutelọ akwụkwọ maka njem nlegharị anyaMịnịsta maka njem nleta na ndị ahịa nchekwa Julia Farrugia Portelli bidoro mbọ Malta na-aga n'ihu site na njem enyi na ihu igwe site na agụmakwụkwọ 30 bụ nke e mere iji belata mgbanwe ihu igwe.
Ndị ọkà mmụta a bụ maka diplọma ọhụrụ n'ịntanetị na njem enyi na enyi na-achịkwa ya na nke ya na SUNx Malta. A na-elekwasị anya nke a ọtụtụ n'ime mba ndị mgbanwe ihu igwe na-emetụta nke ukwuu. Na mbido afọ a, enyere ụmụ akwụkwọ Malta na ndị Gozitan diplọma a n'efu.
Diplọma a bụ nke mbụ n'ụdị ya ma zụọ ụmụ akwụkwọ iji kwado ụlọ ọrụ na njem na ụlọ ọrụ njem na-agbanwe arụmọrụ ha maka ebumnuche nke ịbụ onye na-anọpụ iche na carbon, n'agbanyeghị nsogbu ụwa nke mgbanwe ihu igwe.
Mịnịsta Julia Farrugia Portelli tozuru oke arụmọrụ ya nke na-arụ ọrụ n'ofe ọrịa nke nyeere aka ịmalite mpempe akwụkwọ 30 ndị a. O kwuru na ebe njem na njem dị oke mkpa, a ga-eme ihe ndị a n'ụzọ na-ebelata oke mmetụta nke gburugburu ebe obibi. Onye ozi ahụ kwuru na site na Ọktọba, ITS na SUNx site na diploma ohuru ga-amalite ọzụzụ na isi okwu a siri ike na ụwa ghọtara.
Minista Julia Farrugia Portelli kwuru na "Site na agụmakwụkwọ ndị a na ụlọ akwụkwọ a nke njem enyi na ihu igwe Malta na-etinye onwe ya na mpaghara a ma bụrụ ebe etiti ụwa maka njem enyi na ihu igwe."
Minista Gozo Clint Camilleri kwuru na diplọma na njem njem ihu igwe abụghị naanị inye site na Gozo Campus maka oge izizi, mana ọ bụkwa oge mbụ a na-enye usoro mmụta a nabatara na nke a na mba ụwa. Minista Camilleri kwuru na, "Dị ka ndị Gozitans, anyị nwere nsọpụrụ na ụlọ akwụkwọ a ga-arụ ọrụ site na Gozo ma rịọ m ndị Gozit niile ka ha tinye akwụkwọ maka usoro a na usoro ndị ọzọ nke ndị ITS na-enye." Minista Gozo gara n'ihu na-ekwu na njem dị mkpa maka Gozo na usoro metụtara njem bụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ ndị na-eto eto ka ọ bụrụ ọkachamara na ngalaba dị ezigbo mkpa na Gozo, ebe ha na-aga n'ihu maka ọzụzụ maka ọdịnihu.
Prọfesọ Geoffrey Lipman, Onye isi ala nke SUNx Malta, onye bụbu osote odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO, na Geoffrey Lipman, Onye isi oche na Onye isi ala nke SUNx Malta (Strong Universal Network), na Onye isi ala nke Njikọ Aka nke Ndị Njem Nlegharị Anya nke Mba Nile (ICTP), kwuru na adreesị mebere na:
“Anyị hibere otu ndị nkuzi ruru ihe dị ka iri abụọ na ise nke gụrụ akwụkwọ nke ọma iji nye ha nkuzi mmekọrịta na ntanetị na diplọma a. Nke a ga - enyere ha aka inweta ọrụ dị mma ihu igwe n’ọdịnihu na - anabata ndị ọbịa, ịbụ ndị na - eme iwu maka gọọmentị ma ọ bụ njikwa ebe. Ha ga-achọpụta ihe mere o ji dị mkpa inwe njem enyi na ihu igwe ma mee akụkụ anyị na nzaghachi ụwa maka ọgba aghara ihu igwe dị. Ha ga-amụtakwa ịtụle mgbanwe nke mpaghara njem na njem nleta na ebumnuche UN Sustainable Development, European Green Deal na Paris Climate Accord. N'ime afọ 25 sochirinụ, azụmahịa ọ bụla na njem nlegharị anya na obodo ga-agbanwe gaa njem enyi na ihu igwe, ma ọ bụ site na mkpebi emepụtara, nrụgide ndị ahịa ma ọ bụ ụkpụrụ gọọmentị. Ọ bụ ya mere ohere ọrụ ndị ahụ ga-eji jupụta nke ukwuu, ”ka Prọfesọ Lipman kwuru.
Ndị nwere mmasị nwere mmasị debanye aha maka akwụkwọ a na https://www.thesunprogram.com/climate-friendly-travel-diploma
Ndị ọ bụla nwere mmasị na mmemme a mana ha erughị eru itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ a, nwere ike tinye maka usoro ihe omumu ebe a
Ndị nọ ugbu a maka mwepụta ahụ bụ ndị osote onye isi oche ya, Carlo Micallef, Director of Studies Prọfesọ Glen Farrugia, onye isi gọọmentị Gozo, bụ Jesmond Borg na Hans Friederich, onye otu SUNx Malta.